နေပြည်တော်လေဆိပ် ဖြစ်စဉ်တွင် ရွှေတံဆိပ်ရ အားကစား သမားဟောင်းများ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရွှေတံဆိပ်နှ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်လေဆိပ်ဖြစ်စဉ်တွင် ရွှေတံဆိပ်ရ အားကစားသမား ဟောင်းများပါဝင်ဆက်စပ်နေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရွှေတံဆိပ်နှင့် ဘာမှမဆိုင် လူ့အသိဥာဏ်စဉ်းစားပုံစဉ်း စားနည်းနှင့်သာဆိုင်သည်ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်ကကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်း အဝေးတတိယနေ့အပြီး သတင်းမီဒီယာများက နေပြည်တော်လေဆိပ်ဖြစ်စဉ်တွင် ရွှေတံဆိပ်ရအား ကစားသမားဟောင်းများ ပါဝင်ဆက်စပ်နေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် ယင်းကဲ့သို့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ”နေပြည်တော်လေ ဆိပ်ဖြစ်စဉ်မှာ အားကစားသမား ဟောင်းတွေက သူ့ဘာသာသူလုပ်ပြီး သူ့ဘာသာသူထွက်သွားပြီ။ စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်က ထွက်ခွင့်တောင်းလို့ပါ။ ထွက်ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့က ဒီ့အပြင် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်လို့။ ဒီမှာက အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာ လစာနဲ့မလောက်လို့ဆိုပြီး ထွက်သွားပြီ။ တော်သေးတာပေါ့။ မထွက်ရင် အခုဆိုရင် ကျွန်တော့် ရှေ့တင် ဦးနှောက်ခြောက်ရဦးမှာ။ အခုတော့ သူ့ဘာသာသူပြီးသွားပြီ” ဟု သတင်းမီဒီယာများကို ပြောသည်။ ယင်းမှုခင်းဖြစ်ရပ်ကြီးတွင် ရွှေတံဆိပ်ရသည့် အားကစားသမားများ ပါဝင်ဆက်စပ်နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ”လူတစ်ယောက်ဟာ ရွှေတံဆိပ် ၁ဝ ခုပဲရရ၊ အခု ၁ဝဝ ပဲရရ လူ ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ ရွှေတံဆိပ် မရဘူးဗျာ။ ကောင်းတာလုပ်တာ မလုပ်တာ လူအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ ရွှေတံဆိပ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ လူရဲ့အသိဥာဏ်စဉ်းစားပုံ စဉ်းစားနည်းနဲ့ဆိုင်တာ။ ကျွန်တော် တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ အသေးစိတ်လည်းမသိဘူး။ အခုဟာက အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်ကို သိမှမသိသေးဘဲနဲ့ မဟုတ်လား” ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၏ (၂၅) နှစ်မြောက် အကြိုပန်းချီပန်းပုနှင့် ??
မြဝတီမြို့၌ မသိုးသင်္ကန်းရက်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရာသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမ?